Madaxweyne ku xigeenkii hore ee FIFA oo Booliska isku Dhiibay – Radio Daljir
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee FIFA oo Booliska isku Dhiibay
Maajo 28, 2015 1:14 b 0
Khamiis, May 28, 2015 (Daljir) — Madaxweyne ku xigeenkii hore ee FIFA Jack Warner ayaa isku dhiibay boliiska dalkiisa Trinidad and Tobago ka dib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq.
Ilaa iyo 14 xubnood oo FIFA madax ka ahaa ayaa lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo laaluush qaadasho halka toodba ka mid ah la xiray shalay subax ka dib markii ay boliiska Switzerland ugu galeen guryahooda.
Warner ayaa ka mid ahaa 14ka shaqsi ee loo heysto musuqmaasuqa baahsan ee hareeyay FIFA iyadoo dacwadaan ay soo oogtay waaxda garsoorka Mareykanka oo baaritaan ku sameysay FIFA laakiin Warner ayaa saacado ka dib ka hadlay inuusan danbi laheyn.
72 jirkaan ayaa si iskiis ah isagu dhiibay boliiska magaalada Port-0f-Spain ee wadanka ku yaala jasiirada Caribbean-ka iyadoo uu la socdo qareenkiisa.
Laakiin Warner oo markii la xiray ayaa lagu sii daayay damaanad lacageed oo gaareysa 2.5 milyan doolar laakiin waxaa ku qasab ah inuu boliiska la xiriiro labo jeer isbuucii.
Waxaa maxkamad la soo taagi doonaa 9ka bisha July laakiin wararka ka soo baxaya jasiiradaas ayaa sheegaya in lagu qasbay inuu iska soo dhiibo baasaboorkiisa taasoo la micno ah inuusan safri karin
Dhegeyso:Puunsa oo Qaadacday tirada dadka Soomaaliyeed ee dowladdu shaacisay
Midowga Yurub oo lacag ugu Deeqay howl-galkooda Soomaaliya